Kittens – Petunity
သည်မီးညောင်လေးတွေက ဘုရားမှာ လာရောက်စွန့်ပစ်ခံထားရတာပါ။ ဂေါပကကလည်း မီးညောင်လေးတွေ ဘုရားမှာရှိနေတာ သိပ်မကြိုက်ကြလို့ မွေးစားမယ့်သူရှိရင်တော့ အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ။ သူတို့ကအခုမှ အသက် ၂ လ လောက်ပဲ ရှိသေးတော့ ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုနေလို့ပါနော်။
ကြောင်လေးတွေအကုန်လုံးကို အတူတူမွေးစေချင်ပေမယ့် တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်ချင်း ယူမယ်ဆိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမှာပါနော်။
အထီးလေး ၂ကောင်၊ အမလေး ၂ ကောင်ပါ။
သညျမီးညောငျလေးတှကေ ဘုရားမှာ လာရောကျစှနျ့ပဈခံထားရတာပါ။ ဂေါပကကလညျး မီးညောငျလေးတှေ ဘုရားမှာရှိနတော သိပျမကွိုကျကွလို့ မှေးစားမယျ့သူရှိရငျတော့ အရမျးကောငျးမှာပါပဲ။ သူတို့ကအခုမှ အသကျ ၂ လ လောကျပဲ ရှိသေးတော့ ဂရုစိုကျပေးဖို့လိုနလေို့ပါနျော။
ကွောငျလေးတှအေကုနျလုံးကို အတူတူမှေးစခေငျြပမေယျ့ တဈကောငျ၊ နှဈကောငျခငျြး ယူမယျဆိုလညျး ကြေးဇူးတငျဝမျးသာမှာပါနျော။
These kittens are left alone atapagoda and the pagoda trustee are not happy with them being at the pagoda. They are approximately2months old now. Therefore, they need somebody special to adopt them and you can be that somebody if you wish.
Even though they prefer to be adopted altogether, one, two or all of them just depends on you. We are happy with anything.
Kittens are two males and two females.
Tomar Propecia Lactosa Monohidrato speptmoofs buy cialis online withaprescription queleRen Cialis Generico Sevilla